Lego Ideas 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
20 / 01 / 2021 03 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 2030 Views စာ0မှတ်ချက် 10193 အလယ်ခေတ်စျေးကွက်, 10223 နိုင်ငံများ Joust, 10278 ရဲစခန်း, 21318 သစ်ပင်အိမ်, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော်, Austin Carlson, ရဲတိုက်, Clemens Fiedler, Ideas, Lego, Lego Ideas, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, reviews, မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes Talbott
အကြီးမားဆုံးရဲတိုက် - အကြောင်းအရာ Lego ယနေ့အထိသတ်မှတ်ထားသည်မှာအားလုံးသောရဲတိုက်မဟုတ်ပါ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများအားလုံးဖြင့်သင်ပိုမိုလိုချင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဂုဏ်ပြုခံရခြင်းမှာအလွန်ထိုက်တန်သည်။
အားလုံးမဟုတ်လျှင်အများစုမှာ Lego Ideas အစုရှယ်ယာများသည်အနည်းဆုံးဆန္ဒမဲ ၁၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိခြင်းနှင့်မဲပေးခြင်းတို့အကြားအနည်းဆုံးပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်သည် Lego စတိုး စင်ပေါ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ပန်ကာတည်ဆောက်သူများကိုအနှောင့်အယှက်မပေးသောစည်းမျဉ်းများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် - ဥပမာအားဖြင့်မော်ဒယ်အတူတကွလာပုံ၊ သို့မဟုတ်နံပါတ်၊ အမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးအစားart၎င်း၏ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြု s ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Billund ၏တောက်ပသောစိတ်များသည်ပရိတ်သတ်များထက် ပို၍ သွားနိုင်သည်၊ element အသစ်များကိုအရောင်အသစ်များနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးများထက်ကျော်လွန်သောဒီဇိုင်းများကိုတီထွင်တတ်သည်။ (သူတို့အတွက်သူတို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ် Lego ပြီးနောက်အုပ်စု။
21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ အလွန်ရှင်းလင်းစွာ Clemens Fiedler ၏မူလအယူအဆနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံမှ လွဲ၍ တစ် ဦး ဦး ခေါင်းသို့ရောက်ရှိလာသည့်ကန့်သတ်မှုများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုတွန်းအားပေးခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည် - သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်အနာဂတ်တွင်ခိုင်မြဲစွာစိုက်ထားသည့်ဖိတ်ခေါ်သည့်မော်ဒယ်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၏ Lego Castle, အရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုလက်ခံနေစဉ်။
တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့အဲဒါနဲ့မတူဘူး Lego ယနေ့ရရှိနိုင် set; နှင့်အခြားသူများအတွက်, ကသင်ထံမှမျှော်လင့်ထားအတိအကျအရာပါပဲ Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာသင်ပြလိုသည့်ပုံစံဖြစ်သည် Lego စတိုးဆိုင်များ (သို့မဟုတ် LEGO.com) တတ်နိုင်သမျှဝယ်ယူရန်။
theme: Lego Ideas အမည်သတ်မှတ်မည် - 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ဖြန့်ချိ: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 134.99 / $ 149.99 / € 149.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,164 အသေးစားပုံများ: 4
Lego: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1
Billund ထဲက 18+ ပုံသဏ္everyာန်အမျိုးမျိုးနဲ့အတူအဲ့ဒီအကြောင်းကို yammering လုပ်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ တစ်ဖန်ထပ်မံပြောကြားခြင်း - မပါ ၀ င်သောထုပ်ပိုးမှုကိုမဖော်ပြဘဲရှောင်ခြင်းဖြင့်ရှောင်ပါ။ နောက်ကျောလှပသောကြည့်ပါ art10193 အလယ်အလတ်စျေးကွက်ကျေးရွာနှင့် 10223 Kingdoms Joust တို့ကဲ့သို့အစုံများကိုတန်ဆာဆင်ပြီးပန်းပဲဆရာရဲ့မှောင်မိုက်သောသေတ္တာကိုကြည့်ပြီး၊ Lego တီထွင်ဖန်တီးမှု၏အုပ်စု၏ချန်ပီယံ။
ဤဖြစ်ရပ်တွင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောတင်ဆက်မှုသည်ခေါင်မိုးထိပ်ပေါ်မှချွတ်ပစ်လိုက်သောနောက်ဆုံးထား၏ထူးဆန်းစွာရေးစပ်ထားသည့်ရိုက်ချက်ပါသည့်ညွှန်ကြားချက်များကိုပါအကျုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားစောင့်ကြိုနေသည့်အရာများမှအသေးအဖွဲအားနည်းချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်အမှန်တကယ်အတွက်ဖြစ်သည် Lego ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အုတ်တွေပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါ။ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရ - သင်လမ်းညွှန်လက်စွဲအပါအ ၀ င်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုမျှော်လင့်လို့ခွင့်လွှတ်ခံရလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာ၏အမှန်တကယ်စည်းဝေးပွဲကို 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ထိုမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီနေထိုင်သည်ထက်ပိုသည်။ ဤသည်သည်ခေတ်ကာလအဆောက်အအုံ၏အလယ်ခေတ်နှင့်ညီမျှသည် 10278 ရဲစခန်း ဖြည်းဖြည်းပေမယ့်သေချာပေါက်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သောစတိုင်နှင့်အတူ Lego အစုစုကို (ဒီနှစ်ရဲ့ပဲကြည့်ပါ) 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော် နှင့် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် သက်သေပြဘို့) ။ သငျသညျအထကျအပြည့်အဝ - - ဒါပေမယ့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လုံးဝလက်လှမ်း - အထက်အဆင့်သို့တစ်ခုချင်းစီကိုမသွားမီ, မြေညီထပ်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်များစွာသောလူများအတွက်အကျွမ်းတဝင်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ အနည်းဆုံး ၄ င်း၏နံပါတ် ၁၄ အိတ်များကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်မည်နည်း။ သို့သော်၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရှိတိကျသောနည်းစနစ်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော်လည်း (စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းသည့်) နည်းလမ်းမှပန်းသီးပင်မှအလုပ်ရုံတစ်ခုလုံးပတ်လည်တွင်ရှိသောရှုပ်ထွေးပြီးဂရုတစိုက်စဉ်းစားထားသောအုတ်နံရံအထိစေ့ဆော်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုကိုဆက်ထိန်းထားလိမ့်မည်။
တစ်ခုတည်းသောအာကာသတွင်းတစ်ခုမျှမဖြုန်းတီးပါ - မြေညီထပ်မှာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အလယ်အဆင့်တွင် - တစ် ဦး တိုးမြှင်ဘေးထွက်ဝင်ပေါက်အားဖြင့်ဝင်ရောက် - အပြည့်အဝမီးဖိုချောင်နှင့်ထမင်းစားခန်း suite ကိုပါဝင်သည်; အပေါ်ထပ်တွင်မီးဖိုနှင့်ပြည့်နေပြီးခုံတန်းရှည်၊ အိပ်ယာခင်း၊ ရတနာရင်ဘတ်နှင့်ကော်ဇောများရေးသည်။ ၎င်းသည်နှိုင်းယှဉ်ကန့်သတ်ထားသည့်နေရာများကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် modular အဆောက်အအုံတစ်ခုမှသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်ထက် ပို၍ အသေးစိတ်ရှိသည်။
ပြီးတော့တကယ်ကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သေးငယ်တဲ့ထိတွေ့မှုတွေရှိပါတယ် - ပန်းပဲသမားရဲ့ဖောက်ထွင်းမှုမှာအလင်းအုတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဖိုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရှုခင်းကိုအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည့်ရေတွင်း၊ နှင့်သူတို့၏ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစုဆောင်းရန်လှည်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာနိုက်။ အားလုံးအကောင်းဆုံးနှင့်ဝသကဲ့သို့ Lego ၎င်း၏အုတ်များကိုအသုံးပြုသည် artပန်းချီကားဆွဲရန်၊ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြရန်နှင့်သင့်ကို၎င်း၏ကမ္ဘာသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ကပြောသည်အားလုံး, သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ Clemens Fiedler ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုသင်ဘယ်လောက်အထိခံစားခဲ့ရသလဲဆိုတာအပေါ်များစွာမူတည်နေနိုင်သည်artသငျသညျနောက်ဆုံးအိတ်သို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ခေါင်မိုးတပ်ဆင်စတင်အဖြစ် icularly ။ ပင်တဂွန်အလွှာများ၏အလွှာများသည်အမှန်တကယ်အရောင်တင်သည်artတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်၏ပိုမိုကျယ်ပြန်ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုကိုထင်ဟပ်, သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အရောင်နှစ်ခုလုံး၌သူ၏မူလတင်သွင်းခဲ့တဲ့ထံမှ ure ။ Clemens ၏မော်ဒယ်ကို drab၊ မှောင်မိုက်သောအရောင်များဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည့်နေရာတွင် Wes Talbott နှင့် Austin Carlson တို့၏အရောင်ရွေးချယ်မှုများသည်အလွန်စိတ်ပင်ပန်းစရာမလိုဘဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာစေသည်။
တကယ်တော့ဒါဟာတကယ့်အရောင်တွေထဲမှာပါ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ အများဆုံးသိသာထင်ရှားသောပန်ကာဖန်တီးမှုနှင့်တရားဝင် set ကိုအကြားခြားနားချက်ကိုပြသသည် - အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအား၌, ခိုင်မြဲစွာအပင်ကိုယ်တိုင်က Lego အတိတ်နှင့် (မျှော်လင့်) အနာဂတ်အစုံနှစ် ဦး စလုံးမှအမြင်နှင့်အတူရဲတိုက်နယ်မြေ။ ၎င်းသည်ယနေ့အထိရဲတိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိကကျသောအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်သော်လည်းအရောင်များနှင့်ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာဗေဒကသင်၏စုဆောင်းမှု၏ဘေးတွင်အလွန်ထူးဆန်းနေလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့မည်သည့်လာမည့်ရဲတိုက်မဆို (သို့မဟုတ် စ - အကျင့်ကိုကျင့်၌မကျမည်အကြောင်း - စartကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သောအခင်းအကျင်းကိုပေးသည့်အနေဖြင့်ပရိသတ်ငယ်ရွယ်သောအပိုင်းများသို့ဆွဲဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပတ်သက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောလိပ်စာများကိုချိတ်ဆက်ရန်တွဲဖက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒုတိယအဆင့်တွင်ရှိသောတည်ဆောက်ထားသည့်တည်ဆောက်ပုံသည်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းတော်တော်လေးပျက်စီးလွယ်သည်။ ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲတွင်အရောင်ကွဲပြားမှုအချို့ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဝေးအနက်ရောင်စက္ကူကနေကြိုဆိုပြောင်းရွှေ့နေသော်လည်းထွက်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသင်အတူတကွစုစည်းခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးအပြီးသတ်တဲ့အခါမှာပိုလို့တောင်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အစုတစ်ခုအတွက်အလွန်သေးငယ်သောအရာများဖြစ်သည်။
ပေါင် ၁၃၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသောအစုအတွက်အသေးအဖွဲလေးခုနှင့်တိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်သာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကို Modular Buildings Collection နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်လျှောက်လုံးလေ့လာခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်ကောင်းမွန်ပါသည်။ (10278 ရဲစခန်း ရည်ညွှန်းဘို့, £ 169.99 / $ 199.99 များအတွက်ငါး minifigures ပါဝင်သည်။ )
ရိုးရှင်းသောစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်မှုကဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုမပြောပြနိုင်သော်လည်းသေးငယ်သောရုပ်ပုံများမည်သည့်နေရာတွင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်ကိုလည်းသိရန်ခဲယဉ်းသည်။ ပန်းပဲသမားသည်သူ၏ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူရန်စစ်သားနှစ် ဦး နှင့်အတူသဘာဝကျကျရှိသည်။ ပြီးတော့မြှားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိပါတယ်, ယူဆရ partမင်းငါ့ကိုဒီပန်းပုဆရာကြီးကမင်းရဲ့အလယ်ခေတ်ဒဏ္fာရီကိုရေးနိုင်ပေမဲ့လည်းပန်းပဲသမားဆီကိုအပ်နှံလိုက်တယ်artet ။
အဓိကအချက်ကသင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည့်လူတိုင်းကိုသင်ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ - မည်သည့်အီးမဆိုxtra အသေးစားဓာတ်ပုံများပိုခံစားခဲ့ရပေလိမ့်မည်။ (ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအလယ်ခေတ်အလယ်ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ဖော်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းသွားခြင်းမဟုတ်ပါarticularly ဒီတကယ်တော့တစ်ခုတည်းသောရဲတိုက် - အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသော Lego အခုစျေးကွက်ထဲမှာတင်လိုက်ပြီ။ )
ကျေးဇူးတင်စရာ, box ထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါပဲ။ ပန်းပဲသမားရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးက ဦး ခေါင်းဟာသူ့မျက်လုံးတွေ၊ အပေါက်တွေကနေတစ်ဆင့်အများကြီးဆက်သွယ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကြီးမားတဲ့ချုံပုတ်မုတ်ဆိတ်နဲ့ဖုံးထားတယ်။ လေးသမား၏ squint သည်သူမကိုပန်းသီးပင်၏ပစ်မှတ်ထဲသို့မြှားပစ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ နှင့် Classic Castle ပရိသတ်များသည် Knights များနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင်ချစ်ရန်များစွာတွေ့လိမ့်မည်၊ သင်သည်သူတို့၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်စကားများရန်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်သည် Ninjago-style သံချပ်ကာ, ဒါပေမယ့်သူကအလွယ်တကူဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ သင့်ရဲ့စုဆောင်းမှုထဲကိုနောက်ထပ်စုံတွဲတစ်တွဲထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေ့လျားတဲ့ခြေထောက်တွေပါတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးအသစ်စက်စက်အရောင်တောက်နေတဲ့ဆိုက်ဘေးရီးယားဆီးရီးယားခွေးခွေးကောင်လေး။ ငါတို့ကအမြဲတမ်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူတန်းစားတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါတယ် (သူတို့ကပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားရင်တောင်) ဒါပေမယ့် Clemens Fiedler ရဲ့ဆိတ်ရဲ့မူလအစေးဟာနောက်ဆုံးပွဲမှာအကောင်အထည်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မဖြစ်နိူင်ရင်တောင်ဒီနေရာမှာဇာတ်ကောင်ရေးဆွဲခြင်းကိုကျေနပ်အားရနေဆဲဖြစ်သည်။
£ ၁၃၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ အတွက် ၂,၁၆၄ ခုကိုစက္ကူပေါ်တွင်တော်တော်လေးမျှတစွာကြားရသော်လည်းဤသည်မှာမှန်ကန်သောစျေးနှုန်းဖြစ်သည် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ? အတိုတိုသည် 'if' ဖြင့်ဟုတ်ကဲ့၊ ရှည်လျားသောအဖြေကို 'ပေမယ့်' 'နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဖြစ်ပါတယ်။
Clemens Fiedler ရဲ့မူလဒီဇိုင်းကိုတရားမျှတမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ if သင်သောအပေးအယူနှင့်အတူပျော်ရွှင်ပါတယ် Lego တရားဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်အသက်သွင်းရန် Group မှပြုလုပ်ထားသည်။ Clemens ဆောက်လုပ်ခဲ့သောကြီးမားပြီးရှုပ်ထွေးသောပန်းပဲသမားအားကောင်းစွာသယ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ပိုကြီးပြီး ပို၍ ပင်စျေးကြီးသင့်သည်။ ဒါပေမဲ့ ကြောင်းဖွယ်ရှိသေချာ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဖြစ်ရပြီလိမ့်မယ် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ သင့်ရဲ့ပိုမိုကျယ်ပြန်နှင့်အတူကောင်းစွာကစားသည် Lego ရဲတိုက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်၎င်းသည်မတတ်နိုင်သောပရိသတ်များစွာ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။
ချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်ဆိုရလျှင်၊ ဤသည်မှာစင်ကြယ်သောအလယ်ပိုင်းမြေနှင့်တူသည်artတစ် ဦး အမြင်နှင့်အတူ icularly Ideas ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကဲ့သို့ကြီးမားသောအစုံ၏ဆောင်ပုဒ်ရဲ့အစဉ်အဆက် - ကြီးထွားလာစာကြည့်တိုက် ၂၁၃၂၃ Grand Piano နှင့် 2019 ရဲ့ 21318 သစ်ပင်အိမ်။ အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးလောက်သောရှုထောင့်များဖြစ်သောသင့်ရှေ့မှောက်၌နောက်ဆုံးပုံစံရှိသည့်အခါ၎င်းသည်ပိုက်ဆံအတွက်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးဖြစ်သည်ဟုခံစားရသည်။ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ အမြင့်မှာ ၂၇ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၂၇ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၂၁ စင်တီမီတာရှိသည်။
တည်ဆောက်မှုကိုသင်ပျံသန်းမှာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ တည်ဆောက်မှုနည်းပါးပြီးတည်ဆောက်မှုအားနည်းသောထိုအချိန်များအတွက်မဟုတ်ပါ။ Lego အစုံ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ တရားဝင်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မှမရှိခဲ့ဖူးသော Castle ပရိသတ်များအတွက်£ 2013 / $ 134.99 ကိုကောက်ယူရန်အတားအဆီးမရှိပါ။ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ.
21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်နှင့်နည်းစနစ်မျိုးနှင့်အတူထုပ်ပိုးသည် Lego Group ၏အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များနှင့်စမ်းသပ်ခံရသည်ဟုခံစားရသောနေရာပင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်ပေါ်တွင်ဘေးဘက်တုံးများဖြင့်အုတ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကြွေပြားများကဲ့သို့ပင်နောက်ဆုံးတွင်ရဲတိုက်နှင့်ဆိုင်သောအစုံလိုက်လျှောက်ထားမှုကိုမြင်ရခြင်းကလန်းဆန်းစေသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ application ကဒီအတွင်းပိုင်းကိုတောက်ပစွာထင်ရှားစေပါတယ် Lego ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အလယ်ခေတ်ကမ္ဘာထဲကိုနစ်နေတယ်လို့ခံစားမိလို့ပါ Lego ယနေ့။
အခြေခံအားဖြင့်တူညီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပါပဲ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ အပေါ်ခဲ့ classic Pirates theme: အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်များအနေဖြင့် '၈၀ နှင့် ၉၀ အစုံ' အကြောင်းကိုစာသားများကဲ့သို့ပြောဆိုကြသည်မှာသူတို့၏ဒီဇိုင်းများသည်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ချရသောမော်ဒယ်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ Lego အုပ်စုသည်ယနေ့ထုတ်ဝေသည်။ ဒါပေမယ့် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ပို့ဆောင်ပေးသည် Classic ခိုင်မြဲသော Castle ဆောင်ပုဒ်၏လက်ရှိရွှေခေတ်သို့ Legoပိုပြီးပင်တောင့်တအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုချန်ထားခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့မင်းလက်ထဲမှာမင်းမှာကောင်းတဲ့အစုံရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိလိုက်ရတယ်။
သငျသညျ၏လုပျငနျးထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ Brick Fanatics သင့်ရဲ့မိတ္တူအမိန့်အားဖြင့် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ မှ LEGO.com ငါတို့တစုံတယောက်ကိုသုံးပြီး (ဖွင့်တခါ!) တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← နောက်လတွင် LEGO NINJAGO မဂ္ဂဇင်း၌အခမဲ့လွိုက်စ်တင်သောမုဒ်သေးသေးလေးပါဝင်သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Mandalorian Hunter →